चिनी खान छाडे शरीर र... :: सेतोपाटी :: Setopati
चिनी खान छाडे शरीर र दिमागलाई के फाइदा हुन्छ?
एउटा उखान छ — चिनी पनि धेरै खाए तीतो हुन्छ।
यो उखान त्यसै बनेको होइन।
अचेल वैज्ञानिकहरू चिनी कम खानू, सकभर खाँदै नखानू भन्छन्।
हामीले चियामा हालेर खाने चिनी प्रशोधित हो। कोक, पेप्सी लगायत पेयमा पाइने चिनी प्रशोधित हो। मिठाइमा मिसाइने चिनी पनि प्रशोधित हो। बिस्कुट वा चक्लेट गुलियो हुनुको कारण त्यसमा मिसाइएको प्रशोधित चिनी नै हो। यस्ता प्रशोधित चिनी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ।
प्रशोधित चिनी खान छाड्यौं भने हाम्रो शरीरमा कस्तो असर पर्ला त?
तर, यो अस्थायी प्रभाव हो।
‘यस्तो प्रभाव बढीमा एक साता रहन्छ,’ पोषणविज्ञ ग्रेसी डेरोचालाई उद्धृत गर्दै ‘इन्साइडर’ लेख्छ, ‘जब यो प्रभाव घट्छ र शरीरले प्राकृतिक रूपमै ऊर्जा पाउन थाल्छ, तब तपाईं पहिलेभन्दा तन्दरुस्त, फुर्तिलो र ताजा महशुस गर्नु हुनेछ। चिनी नखाँदा झर्को लाग्ने, दिक्क लाग्ने र निराश हुने प्रवृत्ति हराउँदै जान्छ।’
त्यसपछि प्रशोधित चिनी नखाँदा तपाईंको शरीरमा सकारात्मक प्रभावहरू देखिन थाल्नेछन्।
सबभन्दा पहिला त, चिनीको बलले मात्र हामी ऊर्जावान् रहनुपर्दैन। हाम्रो शरीरमा दिनभरि नै प्राकृतिक रूपले ऊर्जाको मात्रा सन्तुलित रहन्छ।
त्यसैले, चिनी नखाँदा यौनशक्ति बढाउन पनि लाभदायक हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।
यसले समयक्रममा हाम्रो जिब्रोको स्वाद पत्ता लगाउने कोष परिवर्तित हुन्छ। प्रशोधित चिनी मिठो लाग्नेलाई विस्तारै फलफूलमा पाइने प्राकृतिक चिनी नै मिठो लाग्न थाल्छ।
त्यसो भए तपाईं पनि चिनीको मात्रा घटाउने होइन त?
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १९, २०७६, ०६:००:००